Marka hore waxaa aan halkan mahad baladhan uga dirayaa Rabigeena csw Cırka taagay tıır la,aan dhulkana goglay,aadmıgana ka dhigay noole idilkıı kan uga [more]
Ciiro Ahmed Hassan (Dr.Ligle)
Waxaad maqashay Burcad Badeed ee maxaad ka taqaana Burcadda Biriga?
Mudo haatan sanada dhawar ah laga joogo ayaa waxaa soo maray deeganada Puntland masiibo loogu magac daray Burcad Badeed waxayna gaaratay qof wal [more]
Muse Xaaji Abees
HOOYO HALYEEYAD DHUDI, 100 KA ROON MAXAA LOO HAG-RADAY?
RSW ha u naxariisto Hooyo Halyeeyad Dhudi Yuusuf Aadan, rugteeda aakhirona ha ka dhigo JANNADA FARDOOWSA. RSW samir iyo iimaan buuxa ha [more]
W/Q: Siciid Rooraaye
Bisadihii cadka ku heshiin waayay ee u-gardhiibtay daanyeerka!
Berigii aan dhiganayey Dugsiga Hoose, ayaa waxa aan ku dhigtay sheeko xariir taas oo aalaaba looga sheekeeyo, caruurta markii ay yar yar yihiin, mark [more]
Waxaa la soo gaaray xilligii ciidammada deriska ka bixi lahaayeen Soomaaliya! Sida muuqata shacabka Soomaaliyeed waxay dareemayaan in la joogo xilligii wax laga bedeli lahaa siyaasadda ku aaddan joogitaanka ciidammada Af [more]
Qore: Muuse Xaaji Abees
MAXAAN UGA WAHSANNAY MAHADNAQ ALLE?
Sida gacalka Soomaaliyeed wada xasuustaan waatii abaar aad u daran oo baahsani inna wada aseebtay, dad, duunyo iyo noole kalena u dhinteen oon, gaajo iyo baad la'aan, waana innagii af-labadi dhawaaqnay, [more]
Munaasabadaha Itoobiya ee Soomaaliya looga dabbaal degayo waa farrin cad!
Warku waa iska cadyahay, dagaalna kama duwanna kamana xanuun badna midka 26sano annaga Soomaalida ah dhexdeenna ka socday, Itoobiyan [more]
Maxamed Saliid Calisamey
Doorashada Baarlamaanka iyo Madaxweynaha Soomaaliya kadib, ma laga yaabaa inay Soomaaliya Madaxbanaani buuxda hesho?
Waxaa laga yaabaa in akhristeyaasha qaarkood, isweydiiyaan waxa qormadu ula jeedo, madax ba [more]
Waxaan horey u dhaliili jiray siyaasada xukuumada Gaas balse haatan waxaan ciwaankan ku doortay waxaa weeye, waxaan qirayaa inuusan kaligii mas’uuliyada wixii inaga halaaba uusan yeelaneyn. Maxaa yeelay, C [more]
Waa dhaqan soo jireen ahaa waligeed guumeystayaasha in wadanka ay rabaan inay qabsadaan ama ay boobaan inay xilkiisa iska xiji [more]